Mashruuca Mandala Tattoos Fikradda Naqshadda Ragga iyo Haweenka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Mandala Tattoos Fikradda Naqshadda Ragga iyo Haweenka
Ma jiro wax sheegaya in tattoo Mandala yahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dunida. Waxaad u aragtaa hal mar iyo xusuusta qashinka tattoo ee xasuustaada. Waxaa jira sheekooyin badan oo ku saabsan agagaarka tattoo gaar ah. Maanta, hadda ma ahan dadka Mandala ee isticmaalaya tattoo this. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa sidoo kale.
Mandala tattoo macnaha
Talaashka Mandala wuxuu leeyahay macno badan waxayna muujin kartaa midnimada. Wareegga ku saabsan tattoo wuxuu ka hadlayaa dhererka iyo isu-dheelitirka iyo sidoo kale daa'in, markaad eegto masaafada oo dhan ka soo jeedda xariiqda hoose ilaa dhammaan qodobada. Dad badan oo diimeed ah ayaa isticmaalaya iyaga oo sheegaya waxyaabo badan oo ay aaminsan yihiin.
Hinduism - Sida laga soo xigtay Hinduism, #mandala waxay noqon kartaa fikir. Tani waa sababta oo ah waxaa loo isticmaalaa sidii diiradda oo waxay noqotey qalab ku saabsan ruuxa.
Masiixiyada - Masiixiyaddu waxay qaateen mandala ilaa heer kale sababta oo ah waxay ku muujin kartaa qaybo kala duwan oo kaniisad ah sida daaqadaha muujinaya shaqooyinka muhiimka ah iyo sidoo kale loo isticmaali karo qaab fanka ah.
Budhiism - Mandala waxa kale oo ay leeyihiin wax la xidhiidha Buddhist, waxay u isticmaalaan diintooda iyo caadooyinkooda. Waxaa loo adeegsanayaa calaamad isu dheelitirnaanta nolosha.
Mandala #tattoo waxay noqotay wax badan oo dadku u adeegsanayaan inay matalaan waxyaabo badan oo noloshooda ah sida jilicsanaanta. Tattoo waxaa loo isticmaali karaa in la sameeyo bayaanno badan oo aad si dhab ah u aqoonsan karto haddii aad tahay lover of tattoo wanaagsan oo doonaya fikrad.
Maxaa loola jeedaa in lagu sameeyo tattoo sidan oo kale ah? Sanado badan, waxaynu aragnay boqollaal qof oo isticmaalaya tattoo this qurxin inay qurxiyaan jirkooda. Eveyone waxay leedahay muuqaal gaar ah oo ay ku arkaan sawirka tattoo. Qaar ka mid ah dadku waxay jecel yihiin halka qaarkood aysan sameynin, waana wax xaqiiq ah oo ku saleysan sababaha aan shaah aheyn. via
2. Tattoo Hand Mandala
Tobanaan sano ka hor, noocaas oo ah qaab-dhismeedka jidhka ayaa lagu qaddariyay dadweynaha guud, iyo shakhsiyaadka runtii ka dhigay waxa loo arkayay in ay yihiin kacdoon. via
Noqoshada, hadda, maanta, dadwaynaha guud waxay u noqdeen kuwo xor ah oo xor ah, hase yeeshee weli waxaa jira shakhsiyaad tiro badan oo aan diidaneyn in ay maraan marwalba. via
4. Tattoo Sweet Mandala
Inta badan inta badan ma ogaan karto waa habka "tattoo" ay tahay soo bixitaanka ereyga Tahitian "tatu" oo doonaya in wax la shaabadeeyo. Fikirka xaggee wax walba bilaabay? via
5. Maskaxda Mandala Tattoo
Wax walba oo la tixgeliyey, miyaad ku qabatay dabayl "Iceman" oo la helay 1991? Wuxuu ahaa qofka ugu muhiimsan ee jirkiisa ku jiray meelo ka wanaagsan 58. Dhowr baaritaan oo ay ka mid yihiin unugyada aasaasiga ah ee shukaansiga ayaa muujiyey inuu ahaa 5300 da sano via
6. Tartoo Mandala
Dhamaan khadadkaas, dhab ahaantii waa muuqaal in farsamooyinka jidhka uusan ahayn abuuritaan abuuris ah qaabab kasta; waxaa jiray tiro badan oo sanado ka hor ah. via
7. Tattoo Chest Mandala
Bulshooyinka qadiimiga ah ee soo noqnoqonaya dib u soo noqnoqon sanooyin badan oo ka mid ah shaqooyinka jidhka si looga fogaado cudurada. Isticmaalka cirbadaha loo isticmaalo cufnaanta jidhka waxaa markii hore lagu sameeyey Masaaridii ka dib markii uu ku faafay geedka Giriigga, Carabta iyo dhammaadka Aasiya. via
8. Mandala Mandala Back Tattoo
In kasta oo ay xaqiiq tahay in markii hore loo isticmaalay in lagu kala saaro hoodlums, waxa loo beddelay shaqo samaynta Japan, iyada oo xitaa maafiyada Yakuza ay u adeegsadeen in ay cabsi geliyaan dadka kale. via
9. Tattoo Double Mandala
Jidkii hore ee qarniyadii hore; waxay ahayd heer caadi ah qoysaska qaar si ay u yeeshaan dusha sare ee jirkooda ku jira laakiin si kastaba ha ahaatee, ka dib markii uu Norman damacsanaa, qaabkani waa uu burburay iyo badanaa. via
10. Sidee Mandala Tattoo
Dhamaan tobaneeyo sano, qalabyada iyo sahayda loo isticmaalo in lagu soo galo ayaa dhab ahaantii iska beddelay qaybo fiiqan oo ka mid ah arrin la sii wadi karo mashiinada loo isticmaalo qayb ka mid ah 1891. via
11. Tattoo Cute Mandala
12. Maxaad u tegi doontaa Mandala Tattoo?
13. Mandala Tattoo cajiib ah
14. Maskaxda Mandala Tattoo
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad ka dhigi kartid Mandala. Haddii aad ku wareersan tahay nooca tattoo # designign oo aad ku qori karto Mandalaaga, kaliya aadee internet-ka oo fiiri boqolaal naqshadood oo ku haboon si fiican. il image
15. Tartoo Mandala
Haddii aad runtii rabto inaad u aragto sida tan sida gaarka ah, dhammaan waxa aad u baahan tahay in la isku hagaajiyo tattoo gaar ah la designs ama qoraalada erayga si gaar ah. Qarsoodiga ah in la eego si fiican oo qaas ah oo leh tattoo waa in la ogaado waxa dadka kale aysan ku dhicin naqshadooda. il image
16. Tattoo Thala Mandheera
Talaashka Mandala wuxuu leeyahay farriin gaar ah oo ay u gudbin karto. Waa mid ka mid ah tattooska ugu wanaagsan ee qof walba u tegi karo. il image
17. Tattoo Hand Mandala
Ma aha oo kaliya waa qurux badan oo qurux badan, waxay ku siinaysaa hawo ah raaxo iyo raaxo. Waxaad sameyn kartaa tijaabo badan oo aad rabto adigoo sawiraya muuqaalo kala duwan, muuqaalo ama naqshado ku saabsan Mandalaaga oo leh xoriyad badan oo bannaan. il image
18. Dhamaan Tartoo Mandala
Waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad ka fikirto ka hor intaadan tagin tattoo-kaaga Mandala. Waa inaad ka fekertaa farriinta aad isku dayeyso in aad u gudbiso tattoo-gaaga. il image
19. Taleeshinka Lovely Mandala
Waa inaad ka fekertaa haddii aad tattoo qaadato si aad u maamuusato qaybta jirkaada. Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso inaad hesho fariin ruuxi ah ama xitaa fariin kale oo aad rabto inaad noo sheegto. il image
20. Maskaxda Mandala Tattoo
Markaad ka fekereyso in aad u hesho tayada qurxinta Mandala, garbaha ayaa noqon kara meesha ugu fiican. Waxaan had iyo jeer kuu sheegi karnaa in badan oo dumar ah ay isticmaalaan naqshadahan. il image
21. Garabka Blade Mandala Tattoo
Ma jiro qof ku garaacaya fulinta soo socota markaad heshay tattoo midab leh oo leh nooc talefan oo kale ah. Xitaa markii ugu horeysay ee isticmaalayaasha tattoo way jecel yihiin. il image
Xitaa ragga ma laga tagi karo tattoo Mandala. Iyada oo qaab la mid ah tan, waxaad heshay tattoo weyn si aad ugu faantid. il image
23. Tattoo Mandala yaab leh
24. Tattoo Feminine Mandala
Halkan riix halkan si aad u heshid fara badan oo Tattoo Tattoo Fikrado loogu talagalay gabdhaha
henna tattootattoos ubaxtattoos eagletattoo ah octopustattoo indhahatattoos qorraxdatattoos qabaa'ilkatattoosTilmaamta jaalaha ahku dhaji tattoostattoo tilmaanshaatiinka shiidansawirrada raggatattoo biyo ahsawirada gabdhahaTattoos Wadnahasawir gacmeedtattoos qosol lehtattoos cagtatattoos gacantaJoomatari TattoosDhaqdhaqaaqaTattoo infinitytattoos moongadaal u laabowaxaa la dhajiyay tattoostattoos sleevejimicsiga bisadahatattoos iskutallaabtamuusikada muusikadalammaanahatattoo dheemanTattoo Feathertaraagada kubbaddagaraacista gacmahatattoos qoortatattoos saaxiib saxa ahtattoo maroodigakoi kalluunkanaqshadeynta mehndifikradaha tattooTartoo ubax badansawirada malaa'igtalibto libaaxarrow Tattooshimbir shimbirtattoos taajkiicalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahwaxay jecel yihiin tattooslaabto laabta